Itoobiya oo sheegtey iney qabqabataa xubno ka mid ah "Al shabab" iyo "ISIS" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Itoobiya oo sheegtey iney qabqabataa xubno ka mid ah “Al shabab”...
Itoobiya oo sheegtey iney qabqabataa xubno ka mid ah “Al shabab” iyo “ISIS”
ADDIS ABABA (Beegsonews) – Itoobiya ayaa Sabtidii sheegtay inay xidhay tiro aan la cayimin oo ka tirsan dagaalyahannada al-Shabaab iyo ISIS kuwaasoo qorsheynayay weerarro ay ku bartilmaameedsadaan bartilmaameedyo kala duwan oo dalka ka mid ah, oo ay ku jiraan hoteello.
Adeegga Sirdoonka Qaranka ayaa war qoraal ah oo ay baahisay idaacadda dowladda ee Fana ku sheegay in qaar ka mid ah dadka la qabtay ay qabteen howlo sirdoon, oo ay ku jiraan filim duubayaal la beegsan karo.
“Kooxda waxay … isu diyaarineysay inay weerarto hoteellada, xafladaha diinta, meelaha lagu kulmo iyo meelaha dadweynaha ee Addis Ababa,” ayay yiraahdeen saraakiisha Sirdoonku.
Sirdoonka Itoobiya ayaa u shaqeeyay dalka ay dariska yihiin ee Jabuuti si loo soo qabto tuhmanayaasha, oo uu ku jiro hoggaamiyeyaashooda Mohamed Abdullah, sida ay saraakiishu sheegeen.
Xagjiriinta ayaa dhowr jeer weerar ku qaaday bartilmaameedyo militari iyo mid rayid ah oo ku yaal gudaha Soomaaliya waxayna fuliyeen weerarro dibedda ah, oo ay ku jiraan kuwii ay ka fuliyeen Kenya.
Previous articleIran: cid kasta oo na soo weerarto cashar lama illaawaan ah ayaan u dhigeynaa
Next articleEthiopia arrests elements of “al Shabaab” and “ISIS” planned attacks
Farmaajo oo qaabilay Wafdi ka socday QM